KUBVA payakatanga muna 2014, nhepfenyuro iyi yepaIndaneti inonzi JW Broadcasting iri kuramba ichikurudzira uye ichizorodza vanhu vakawanda pasi rese pane zvekunamata. Nhepfenyuro yacho yava kubuda mumitauro inopfuura 90. Semuenzaniso, iye zvino mapurogiramu eJW Broadcasting ava kushandurirwa mumitauro yakadai sechiEwe, chiGa, nechiTwi (sezviri kuratidzwa), uye izvi zviri kufadza vaparidzi vanopfuura 130 000 vari muBenin, Côte d’Ivoire, Ghana, neTogo. *
“Pandinoteerera hama dzeDare Rinotungamirira nevabatsiri vadzo, ndinonzwa sekuti Jehovha ari kutaura neni mumba mangu chaimo,” anodaro Agatha, mudzimai wemumwe mutariri wedunhu kuGhana. “Dai yakanga isipo, munhuwo zvake akaita seni aisazombowana ropafadzo yakakura kudaro yekunzwa hama idzodzo! Yakatiswededza pedyo chaizvo nehama nehanzvadzi dzedu dzinodiwa dziri munyika yese.”
KuZambia kwakabva mashoko ekuti: “Kunyange zvazvo vaparidzi vari muungano zhinji vasina zvakawanda zvekurarama nazvo, vari kuita zvavanogona kuti vabatsirwe neJW Broadcasting. Semuenzaniso, Ungano yeMisako iri kure nemakiromita anenge 32 kubva muguta riri pedyo uyewo kwairi kwacho kumapurazi uko kune tunzizi twakawanda twunozara mvura panguva yekunaya.” Mumwe mushumiri anoshumira anonzi Simon uyo akatamira kuungano iyi yaidiwa vaparidzi vakawanda, akatsanangura kuti: “Mwedzi wega wega, mumwe munhu wemuungano anofamba kwemaawa maviri kuti abate mugwagwa mukuru, okwira kombi kuti aende kuguta kunodhaunirodha mapurogiramu acho. Mumwe murume ane makore 70 nevanakomana vake vaviri, vakanga vasati vambopinda misangano neZvapupu zvaJehovha, asi murume wacho akabayiwa mwoyo paakanzwa kuti vanhu vaizoratidzwa mavhidhiyo pamisangano kumamisha ikoko. Murume wacho akati, ‘Izvi zvinonyatsobatsira pakudzidza nezvaMwari.’”
KuRussia kwakabva tsamba yekutenda inoti: “Tava negore tichiona JW Broadcasting uye tiri kufara chaizvo kuti tava nemukana iwoyo. Patakaona purogiramu yekutanga, takanyatsonzwa taswededzwa pedyo nehama dzedu dzemunyika yese! Takafara chaizvo! Tinonyatsoona kuti tiri mhuri imwe chete! Takafara chaizvo kuona hama dzedu dzinodiwa dzeDare Rinotungamirira. Vanoedza nemwoyo wese kuti vatipe zvekudya panguva yakakodzera, uye tese zvedu tava kukwanisa kuvaona. Tinenge takatarisira purogiramu imwe neimwe. Tinotodada nekushevedzwa nezita rekuti Zvapupu zvaJehovha. Hama dzinodiwa, tinokutendai! Tinotenda Jehovha naKristu nebasa rakanaka rese ravari kuita. Zvinotisimbisa uye zvinotizorodza!”
Horst nemudzimai wake Helga, avo vakwegura uye vane utano husina kunaka vanogara kuGermany, vakanyora kuti: “JW Broadcasting yakanaka chaizvo. Tinosimbiswa, kunyanya patinonzwa nezvehama nehanzvadzi dzedu dzakaremara. Muenzaniso wadzo unoita kuti tipe zvakanakisisa zvatiinazvo pasinei neutano hwedu husina kunaka. Kuona zvinoitwa neimwe hama yakaremara inoshanda semukuru, kwakatiratidza kuti tese tine zvatinogona kuitira Jehovha. Zvadzinoita zvinoita kuti tide kutenda Jehovha uye kumukumbira kuti adzikomborere chaizvo.”
Kodi, wekuEngland, anoti: “Ndinokutendai nenguva uye simba zvamunoshandisa pakuita zvinhu zvepajw.org, JW Broadcasting, uye mavhidhiyo aKuda naSarudzai. Ndinokutendaiwo nekuita kuti Bhaibheri rive nyore kunzwisisa. Ndakabhabhatidzwa ndiine makore 8. Kana ndati kurei, ndichazvipira pakuvaka Dzimba dzeUmambo! Uye ndinoda kuzoshanda paBheteri. Iye zvino ndava nemakore 9, saka ndichambomirira.”
Arabella wekuEngland ane makore 8 akanyora kuti: “Ndinokutendai chaizvo nemavhidhiyo uye nemabasa ekuita zviri pajw.org. Zviri kundibatsira chaizvo kuti ndiwedzere kuziva Jehovha. Mabasa acho anoita kuti ndinakidzwe pandinodzidza nezvaJehovha. Muri nyanzvi pakuita nziyo dzisingakanganwiki. Mavhidhiyo aKuda naSarudzai ari kundibatsirawo. Ndinokutendai nekushanda nesimba kwamuri kuita.”
^ ndima 3 Unogona kuvhura JW Broadcasting kana ukaenda patv.jw.org.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe JW Broadcasting ‘Inotipa Simba Uye Inotizorodza!’